Kedu ihe bụ akwụkwọ mkpuchi PE?
1: Ihe mkpuchi mkpuchi PE pụtara: Kpuchie ihe nkiri plastik PE na-agbaze nke ọma n'elu akwụkwọ ahụ iji mepụta akwụkwọ mkpuchi, nke a na-akpọkwa akwụkwọ PE. 2: Ọrụ na ngwa E jiri ya tụnyere akwụkwọ nkịtị, ọ nwere nguzogide mmiri na mmanụ. A na -ejikarị ya eme nri ...
Obere nzọụkwụ Nnukwu ihe dị iche- Board Bio
Ọdịnala PE imegharị emegharị 一 ： Ọnọdụ nka nka Recycling 1.nchịkọta 2.sorting 3.shredding 4. ịsa 5.chacha na ịcha mma ： ： Ihe ịma aka 1. Naanị obere akụkụ nke rọba plastik ka enwetaghachiri iji megharịa ya ma ọ bụ megharịa ya. 2. recycl na-efu ọnụ ma dị mma ...
Banyere ningbo n'ogige atụrụ, ị nwere ike ịchọ ịma ihe
Hey, nke mbụ, m ghọtara nke ọma ihe na -echegbu gị na ihe kpatara ya, n'ihi na ị na -abụkarị ndị ahịa ikpeazụ maka akwụkwọ akụkọ tupu .O nwere ihe ụfọdụ dị n'okpuru ebe a ka m chọrọ ịkọrọ gị nkọwa doro anya, n'agbanyeghị na gị na anyị na -azụ ahịa ma ọ bụ ọ bụghị . 1: ”NINGBO FOLD” bọọdụ ọdụ ụgbọ mmiri C1S bụ ihe ...
Long eriri dum osisi pulp akwụkwọ
site na nchịkwa na 21-02-03
Ogologo eriri ogologo osisi pulp akwụkwọ nkịtị osisi pulp akwụkwọ eji eme ihe bụ mkpụmkpụ eriri eriri, mana anyị na -eji ogologo eriri pulp, ike ọdụdọ ugboro 5 ka mma karịa eriri dị mkpụmkpụ! Magburu onwe stiffness na ike na -agbasa na -eguzogide ogologo eriri bụghị naanị nwere ...
Okwu mmalite gbasara akwụkwọ
Okwu Mmalite Banyere Akwụkwọ 1: A na -ejikarị akwụkwọ mwepụ ewepụta akwụkwọ maka mbipụta akwụkwọ (offset) ma ọ bụ igwe mbipụta ndị ọzọ iji bipụta akwụkwọ mbipụta dị elu karịa, dị ka akwụkwọ akụkọ ihe osise agba, akwụkwọ eserese, akwụkwọ mmado, ụghalaahịa agba agba na ihe ndị ọzọ ...
Okwu mmalite gbasara akwụkwọ enyemaka Akwụkwọ bụ isi akwụkwọ eji ebipụta akwụkwọ enyemaka na akwụkwọ akụkọ. Kwesịrị ekwesị maka ọrụ dị mkpa, akwụkwọ sayensị na teknụzụ, akwụkwọ akụkọ agụmakwụkwọ na ihe nkuzi, dị ka akwụkwọ ederede. Akwụkwọ enyemaka dịka ihe mejupụtara pa ...